Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Chikunguru 31, 2020
Mumwe wemauto akabatira kubvisa VaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika, VaPerence Shiri, varadzikwa nhasi mupanzvimbo inovigwa magamba yeNational Heroes Acre muHarare mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vachikurudzira vana chiremba nevakoti kuisa zvido zvenyika pamberi nekudzokera kubasa kuitira kuti vabatsire kudzvirira kuparara kwechirwere cheCovid 19 icho chauraya vanhu vakawanda munyika, kusanganisira VaShiri avo vakashaya nemusi weChitatu.
Bazi rezvehutano rinoti huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira nezuro kusvika pamakumi mashanu nevatatu, kana kuti 53, uye vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru zvitatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri.
Vanhu vakawanda vanorohwa nemasoja pamwe nekunosungwa nemapurisa munzvimbo dzakawanda munyika muzuva ranga rakarongwa ne July 31stMovement kuti vanhu varatidzire vari munzvimbo dzavanogara.
Mupepeti weZimLive, Mduduzi Mathuthu, anopihwa mukana wekusabvisa mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake pamhosva yekukurudzira mhirizhonga yaari kupomerwa.
Madzimai matatu eMDC Alliance, Muzvare Joana Mamombe, Muzvare Netsai Marova naMuzvare Cecilia Chimbiri anosungwa pamwe chete negweta ravo, VaObey Shava, apo vanga vari munzira kuenda kunozvipirira kumapurisa sezvakatarwa nedare redzimhosva.
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyika.